प्रेम बानियाकी छोरी को आशिर्बाद ? एउटा मन छुने लेख प्रेम बानियाको(भिडियो सहित) « Npnews
प्रेम बानियाकी छोरी को आशिर्बाद ? एउटा मन छुने लेख प्रेम बानियाको(भिडियो सहित)
न त दसैं स्वदेशी नै हुन्छ ! दसैं त आस्था र मनको पर्व हो । यो त धेरै-धेरै फराकिलो, विशाल अनि ब्यापक हुन्छ शायद: मान्छेहरु, भूगोल र परिधीहरुभन्दा धेरै ! त्यसैले यसपाली हामीले ‘आफ्नो दसैं’ मनायौं । आमा र माटो सम्झेर संस्कृति मनायौं । धर्म सम्झेर आस्थाको पूजा गर्यौं । आत्मीय र सभ्य संस्कारको सम्मान । जहाँ बसेर मनाए पनि दसैं आफ्नै पर्व लाग्नेरहेछ विशेष !
एकै शहरमा रहनुभएका सम्मानित दाइ, भाउजू, साथीभाइहरुको अविरल मायामा रमाइरहेका हामी । यो कति दीर्घखुशीको विषय हो ! यो कति रंगिबिरंगी खुशीको पर्व भयो ! अमेरिकाको एटलान्टा शहरमा आफन्तहरुको माया र छाया निकै विशाल र प्रिय छ हाम्रा लागि । आफन्तहरुबाट पाइरहेको न्यानो माया निकै कन्चन र पवित्र छ । क्या, लालित्य छ सम्वन्धमा ? कमाउनु/नकमाउनु, लिनु/दिनु/नदिनु, मीठो/नमीठो कुनै स्वार्थ छैन ।